ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: အသွင်ကူးပြောင်းရေးလုပ်ငန်းတွေ အရှိန်မပျက်အောင် သမ္မတဦးသိန်းစိန် အစိုးရအကြီးအကဲအဖြစ် ဆက်လက် ဦးဆောင်သွားသင့်သလား (တိုက်ရိုက်လေလှိုင်း ဆွေးနွေးပွဲ)
အသွင်ကူးပြောင်းရေးလုပ်ငန်းတွေ အရှိန်မပျက်အောင် သမ္မတဦးသိန်းစိန် အစိုးရအကြီးအကဲအဖြစ် ဆက်လက် ဦးဆောင်သွားသင့်သလား (တိုက်ရိုက်လေလှိုင်း ဆွေးနွေးပွဲ)
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 3:41 PM
ကျုပ်ကတော. ဗိုလ်သိန်းစိန် ဆက် အုပ်တာ ၊ မအုပ်တာ
လောလောဆယ် မီတာခတွေ တက်တာ စိုးရိမ်တယ် ။
အစိုးရက ပြည်သူတွေ အဆင်မပြေ ၊ ဒုက္ခ ပင်လယ်ဝေနေ
တာ ဘာမှလုပ်မပေးနိုင်သေးဘဲ ၊ မီတာခတက်တာတော.
ပြည်သူတွေအတွက် ဆိုပြီး လက်သီးလက်မောင်း တန်းနေ
သူ " ပါပါ တို.၊မါမါ တို. ၊ အကိုကြီး ၊ အမကြီးတွေကလည်း
နိုင်ငံ ဂျား ကို အလှည်.ကျ သွားနေရတော. ပြည်သူတွေ
မီတာခ တလ ၅သောင်းကျ
ရင် မမှုတဲ.သူတွေရှိသလို ၊
၁ သောင်း လောက်ကိုတောင် တော်တော် ညည်းနေကြတာပါ ။
ပြည်သူတွေ မီတာခတက်လို. ကြပ်တည်းကြအုန်းမှာပါ။
အောက်ခြေ ၀န်ထမ်း တယောက်အဖို. မိမိ လစာ ရဲ. ၂၀% က ၂၅% လောက်ကို မီတာခ ပေးရတော.မယ်။ ။
မီတာခတက် သလောက် လစာလည်း ဆတိုးညီတက်ရင် တော်သေး ။
If possible, we do not want to let Military people or ex-military govern our country. We want them to go back to their Army/professional field. Even U Thein Sein or who ever in the 25% parliament military guys, all need to stay back at the army.